Monday February 04, 2019 - 08:57:14 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Hoggaanka Ururka Midowga Afrika ayaa ku dhawaaqay in dabayaaqada bishaan dalka Soomaaliya laga saarayo kun askari oo katirsan ciidamada Burundi ee qeybta ah soo duulayaasha shisheeye.
Kulan ka dhacay xerada Xalane ayaa lagu xaqiijiyay in ciidamada Burundi ay bilaabayaan bixitaan qeyb ka ah qaraarkii kasoo baxay Q.Midoobe ee tirsigiisu ahaa 2431(2018).
Francisco Madeira oo ah madaxa Ururka Midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamadan ay ka bixi doonaan dalka marka lagaaro 28 bishaan Febaraayo wuxuuna ku tilmaamay qorshe qeyb ka ah dhimista ciidamada AMISOM.
"Waan uga mahad celinaynaa marti qaadka naloo sameeyay, si aan uga wadahadalno arin muhiim ah, waxaan filayaa in ugu dambeyn qorshaha kalaguurka uu noqday mid dhab ah, waana go’aan xanuun badan oo la qaatay.. waxaan kuu sheegayaa mudane in ka Hir-shabeelle ahaan aan sameyn doonno wax weliba oo la sameyn karo” ayuu yiri Max'med Cabdi Waare.
kulan saacado badan qaatay ayaa xerada Xalane ku dhaxmaray mas'uuliyiinta maamulka fadhigiisu yahay magaalada Jowhar wuxuuna kusoo idlaaday fashil iyo guul darro.
"waa go'aan lagaaray oo fulintiisa aan dib loo dhigi karin balse madaxweyne Waare waan la dareensanahay in uu yahay mid murugo leh" ayuu yiri Francisco Madeira xilli uu kulan laqaadanayay Max'med Cabdi Waare.
Dhinaca kale maamulka dabadhilifka ah ee isku magacaabay Hirshabelle ayaa sheegay in tallaabadan gobolka Sh/dhexe looga saarayo qaar kamid ah ciidamada AMISOM ay dhankooda ku tahay murugo.
"Go’aanka Ciidamada Burundi looga saarayo dalka waa mid xanuun badan oo laga murugoodo gaar ahaan deegaannda Hirshabele" sidaas waxaa yiri Waare.
Maamulka isku magacaabay Hirshabelle ayaa ka baqdin qaba in marka ciidamada Burundi ay isaga baxayaan deegaanno katirsan Sh/dhexe ay islamarkiiba dib ula wareegaan xoogaga Shabaabul Mujaahidiin.
Midowga Afrika oo uu ku daba dheeraaday dagaalka Soomaaliya ka socda ayaa ka sheeganaya dhaqaala darri baahsan kadib markii Ururka EU uu yareeyay dhaqaalihii uu siin jiray.